Actualités Malgaches – Page 28 – Madatopinfo
Toerana malaza, ifamezivezen’ny olona maro ny tsenan’Anosibe. Vao nanomboka ny vanim-potoana fahamehana ara-pahasalamana teto amintsika dia efa nandray ny andraikiny avy hatrany ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny teo anivon’ny tsenan’Anosibe izay tarihan’ny
FAMOKARAM-BARY ALAOTRA : Mila fanarena ireo fotodrafitrasan’ny sopitr’i Madagasikara
Potika vokatry ny fandalovan’ny rano be ny volana febroary lasa teo ny ankamaroan’ireo fotodrafitrasan’ny fambolenana, faritra Alaotra Mangoro. Betsaka ireo tantsaha mpamboly ao amin’ny lemaka PC 23 izay ahitana velaran-tany
FETIM-PIRENENA 2020: Voafetra ho 80 ny olona hasaina hanatrika ny matso
Hiavaka ny fankalazan’ny Malagasy ny fetim-pirenena amin’ity taona ity noho ny fisian’ny valanaretina covid-19 eto amintsika. Raha eny amin’ny kianjaben’ny Mahamasina hatrany mantsy no mahazatra hankalazana izany lanonana izany isan-taona,
TOBIN-TSOLIKA GALANA ETO ANTANANARIVO: Mizara « gel hydroalcoolique » ho an’ny mpanjifa hatramin’ny 31 Mai
“Galana, miaro ny fahasalaman’ny mpandeha taxi-be”. Amin’izao vanim-potoanan’ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny fepetra fihibohana amin’ny ampahany mihatra eto Antananarivo izao, dia misy ny hetsika miavaka atolotry ny Galana Madagagascar ho
TOURISME A MADAGASCAR: 1 500 000 travailleurs ont perdu leur emploi dans les 3 mois suivant leur détention
Mercredi dernier, un groupe de touristes de la CTM ou Confédération du Tourisme de Madagascar a tenu une déclaration à
FIATREHANA NY COVID-19: Nanolo-tanana ny Kaominina Antananarivo renivohitra ny orinasa Vitogaz
Notanterahana ny marainan’ny talata 19 Mai teny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra sy ny
IVON-TOERANA ENY ANOSIZATO: Olona tsy manan-kialofana miisa 260 no horaisina an-tanana
Notanterahana ny marainan’ny alarobia 13 Mai teny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra sy
VOLY AVOTRA AMBANDRIKA AMBATONDRAZAKA : Lo am-pitoerana ny « poivron » noho ny coronavirus
Vitsy ny mpandraharaha ara-toekarena mpanangom-bokatra avy any Antananarivo no tonga any Alaotra ka simba ny entana, tahaka ny « poivron ». Fatiantoka
OPÉRATION SMILE ETO MADAGASIKARA : Nitondra ny anjara birikiny hiadiana amin’ny covid-19
Manoloana ny fahamehana ara-pahasalamana sy ho fanajana ireo fepetra rehetra mandritra izao ady amin’ny valan’aretina covid-19 eto amintsika izao, dia
Araka ny resaka manokana nifanaovana tamin’ny mpiandraikitra ny fitiliana TDR, heverina fa teto Madagasikara efa nitoetra andro maro vao
Page précédente 1 … 26 27 28 29 Page suivante